လေစွမ်းအင်၏ကောင်းကျိုးများ - ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အသုံးပြုမှုနှင့်အားနည်းချက်များ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
လေစွမ်းအင်သည်စွမ်းအင်မော်ဒယ်၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့မှုတို့ကိုပြောင်းလဲရန်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။ တိုးတက်လာသောနည်းပညာသည်အချို့သောလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများအားကျောက်မီးသွေးနှင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများကဲ့သို့စျေးနှုန်းချိုသာစွာထုတ်လုပ်နိုင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောစွမ်းအင်သည်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိသော်လည်း၊ ပြီးတော့များစွာသောရှိပါတယ် လေစွမ်းအင်၏အားသာချက်များ။
3.1 ၎င်းသည်ကုန်ခန်း။ မရသောစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီးနေရာအနည်းငယ်သာရရှိသည်
4.2 ရှုခင်းနှင့်ဇီ ၀ မျိုးကွဲများ၏သက်ရောက်မှု
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ဒီစွမ်းအင်အမျိုးအစားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်။ လေစွမ်းအင်သည်လေမှရရှိသောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လေစီးကြောင်း၏လုပ်ဆောင်မှုမှထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒီစွမ်းအင်ကိုမီးစက်တစ်ခုကနေတစ်ဆင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်ကိုသန့်ရှင်း။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကင်းသောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်.
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လေစွမ်းအင်အများဆုံးထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဖြစ်ပြီးဂျာမနီ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့်စပိန်တို့ဖြစ်သည်။ လက်တင်အမေရိကတွင်အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူမှာဘရာဇီးဖြစ်သည်။ စပိန်တွင်လေစွမ်းအင်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအိမ်ခြေ ၁၂ သန်းနှင့်ညီမျှသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်၏ ၁၈% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတိုင်းပြည်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီများမှပေးသောစိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်အများစုသည်လေအားလျှပ်စစ်မှဖြစ်သည်။
လေစွမ်းအင်ကိုလေတာဘိုင်၏ဓါးသွားများကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ လေရဟတ်တာဘိုင်တစ်မျိုးသည်လေရဟတ်တာဘိုင်တစ်ခုဖြင့်မောင်းနှင်သောမီးစက်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ရှေ့လေသည်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ လေရဟတ်တာဘိုင်တွင်မျှော်စင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ တည်နေရာစနစ်သည်မျှော်စင်၏အဆုံး၊ ၎င်း၏အထက်အဆုံးတွင်တည်ရှိသည်။ ရဲတိုက်၏အောက်ခြေရှိလျှပ်စစ်ကွန်ယက်ကိုကက်ဘိနက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ကာစရာကုလားကာသည်ကြိတ်စက်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုသိုလှောင်ထားပြီးဓါးသွားများအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်; ရိုးတံနှင့်ရဟတ်များကိုဓါးသွားများ၏ရှေ့တွင်မောင်းနှင်သည်။ nacelle တွင်ဘရိတ်၊ မြှောက်ကိန်းများ၊ မီးစက်နှင့်လျှပ်စစ်ညှိနှိုင်းမှုစနစ်များရှိသည်။
ဓါးသွားများသည်လှည့်ပတ်စက်ကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ အလှည့်သည်ဂျင်နရေတာသို့လှည့်စွမ်းအင်ပို့ပေးသည့် (သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်တည်ရှိသည်) ရိုးတံနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မီးစက်သည်သံလိုက်ကို အသုံးပြု၍ ဗို့အားထုတ်ရန်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်သည်။
လေစွမ်းအင်၏အားသာချက်များသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းတို့ကို ပိုမို၍ အသေးစိတ်အသေးစိတ်ခွဲဝေရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေသည်ကြွယ်ဝ။ မကုန်ခမ်းနိုင်သောရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မူလစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုအမြဲအားကိုးနိုင်သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်မရှိပါ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တူညီသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကိုစုဆောင်းသိုလှောင်ရန်လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် photovoltaics ထက်မြေနေရာနည်းပါးသည်။ ဒါဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်, ဆိုလိုတာကပန်းခြံကသိမ်းပိုက်areaရိယာယခင်ကရှိပြီးသားပိုင်နက်အသစ်သက်တမ်းတိုးရန်အလွယ်တကူပြန်လည်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
လေစွမ်းအင်သည်နေစွမ်းအင်ပြီးလျှင်အသန့်ရှင်းဆုံးစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း၏အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏မျိုးဆက်ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များသို့မဟုတ်အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ လေရဟတ်တာဘိုင်၏စွမ်းအင်စွမ်းရည်သည် ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသောစွမ်းအင်ပမာဏနှင့်ဆင်တူသည်။
ထို့အပြင်တာဘိုင်ကိုယ်နှိုက်ကစွန့်ပစ်ရန်မဖယ်ရှားမီအလွန်ရှည်လျားသောသက်တမ်းရှိသည်။ လေတာဘိုင်နှင့်တာဘိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များသည်အတော်အတန်နည်းသည်။ လေတိုက်နှုန်းမြင့်မားသောဒေသများတွင်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ကီလိုဝပ်နှုန်းသည်အလွန်နိမ့်သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များသည်ကျောက်မီးသွေးသို့မဟုတ်နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဤစွမ်းအင်အမျိုးအစားသည်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားမျက်နှာသာအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအချက်။ ဥပမာအားဖြင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများသည်လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ယင်း၏အစဉ်အလာလှုပ်ရှားမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်များဖန်တီးရန်စက်ရုံကိုခွင့်ပြုထားသည်.
လေစွမ်းအင်ကိုခန့်မှန်းရခက်နိုင်သဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုခန့်မှန်းချက်များသည်အမြဲတမ်းပုံမှန်မဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့်ယာယီပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ စွန့်စားမှုကိုလျှော့ချရန်၊ ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ရေရှည်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ပြန်လာသောတွက်ချက်မှုသည်ပိုမိုလုံခြုံသည်။ ဤချို့တဲ့မှုကိုလေတာဘိုင်များဖြစ်သောအချက်အလက်တစ်ခုနှင့်ပိုမိုနားလည်နိုင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ မှ ၄၀ ကီလိုမီတာ / တစ်နာရီခန့်သာပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သည်။ နိမ့်သောအမြန်နှုန်းတွင်စွမ်းအင်သည်အမြတ်အစွန်းမဟုတ်သောကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတွင်၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သိုလှောင်။ မရနိုင်သောစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထုတ်လုပ်သောအခါချက်ချင်းစားသုံးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အခြားစွမ်းအင်အမျိုးအစားများကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ရှုခင်းနှင့်ဇီ ၀ မျိုးကွဲများ၏သက်ရောက်မှု
အကြီးစားလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများသည်ခိုင်မာသောရှုခင်းများသက်ရောက်မှုရှိပြီးအကွာအဝေးမှမြင်နိုင်သည်။ မျှော်စင် / တာဘိုင်၏ပျမ်းမျှအမြင့်သည် ၅၀ မှ ၈၀ မီတာအထိရှိသည်။ နှင့်အလှည့်ဓါးသွားနောက်ထပ် 40 မီတာထမြောက်ကြသည်။ ရှုခင်းအပေါ်ဗေဒသက်ရောက်မှုသည်တစ်ခါတစ်ရံဒေသခံများအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
လေစိုက်ခင်းများသည်ငှက်များကိုအထူးသဖြင့်ညအချိန်တွင်လှုပ်ရှားနေသောခွေးများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ငှက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာထိုအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် အလှည့်ဓါးများသည်အမြန်နှုန်း ၇၀ ကီလိုမီတာ / တစ်နာရီဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ငှက်များသည်ဤအမြန်နှုန်းဖြင့်လှော်များကိုအမြင်အာရုံမမြင်နိုင်။ သူတို့နှင့်အတူသေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » လေစွမ်းအင် » လေစွမ်းအင်၏အားသာချက်များ